Rasaasa News – Diinta, Degaanka iyo ESTV
on February 12, 2014 12:00 am
Jijiga, Feb 12, 2014 – Diin waa rumayn iyo caabudida awood aan mid loo dhigaa jirin oo ah jiritaanka Eebe Wayne. Taas oo saamayn wayn ku leh jirida hab nololeed iyo dhaqan kala duwanaanshaha Ilama Aadam. In kasta oo ay jiraan dad aan waxba rumaysnany, balse rumaysan dhimasho iyo nolol (life cycle), ay ugu wacan tahay wareega noloshu.
Sida ay qoraan kutubta casriga ah ee galbeedku, waxaa jira afar iyo toban qolo oo leh wax ay rumaysan yihiin [diimood]. Waxaa kale oo jira 8 Diimood oo leh hanaan Eebe Wayne lagu caabudo sida; [Muslim,Christianity, Buddhism,Hindus, Jews, Sikhs, Baha’is iyo Jainism].
Diinta Islamka, oo ah diinta ugu dambaysa ee dunida jirta, waxay xustaa 99 Nabi oo Eebe Wayne soo diray oo afar ka mid ah kitaab la siiyey [Furqaan [Islam), Tawreed (christianity), Injiil (Jewish) iyo Sabuur (Nabi Ibraahin)].
Diimaha ayaa saamayn wayn ku leh hab nololeedka bulshooyinka aduunka, caabudida, barashada, guurka, cuntada, maamulka iyo nooc walba oo nolosha ah. Dadka aan diinta haysan waxay ku nool yihiin nolol aan xakamaysnayn oo dhibaato badan.
Waxaa jira kuwa diimo haysta oo sida ay farayso aan ugu dhaqmin, kolka ay dhibaato gaadhan ka qoomameeya ku dhaqan la,aantii diintooda.
Degaanka Somalida Atoobiya oo ah kobta ay dulucda sheekadu u socoto, sida ay qabaan waa dad muslim 100%, Atoobiya waxay tiro koobteeda ku qortaa 94% Muslim, 6% Masiixi.
Degaanka Somalidu wuxuu dawlad la wadaagtaa dal balaadhan oo ay xukunto qoomiyad masiixi ah [christian]. Kala duwanaanta diinta ka sokow, waa degaan gumaysi ku jira oo aan u madax banaanayn go,aan qaadashada hanaanka nolosha. Arintaas daraadeed, waxaa degaanka jiray dagaalo badan iyo cadaawad ku qotonta Gumaysi iyo Diin.
Wixii ka horeeyey 23 sano, Somalidu waxay si aad ah isaga ilaalin jirtay dhex galka Atoobiya, taas oo keentay in ay ka qado ilbaxnimada cusub ee aduunka [tacliinta], waxayna ka faa,iiday ilaalinta dhaqanka, diinta iyo dhulka.
23-kii sano ee ugu dambeeyey, waxaa loo gaystay Somalida degaanka dhibaato ciqaabeed oo xun, waxayna haatan qaayibtay, wixii ay ka diiddanayd Atoobiya 116 sano. Somalida Atoobiya waxay ogolaatay wax ayna hoe u ogolaan jirin oo ah Aamus iyo Adeecnimo aan dan ugu jirin, aakharo iyo aduun.
Degaanka Somalida waxaa loo baahiyaa afar Ideecadood [Addis Ababa, Dire Dawa, Herar iyo Jijiga], oo ku baxa afka Somaliga iyo Telefishin satellite ah oo laga daawado qaaradaha ay degan yihiin dibad-joogta degaanku. Waxaa kale oo jira wasaarada u qaabilsan degaanka waxbarashada iyo waliba wakaalad u qaabilsan arimaha Islamka.
Waxaa wax lala yaabo ah in manhajka waxbarashada ayna ku jiriin maadada barashada diinta Islaamka. Ideecadaha iyo telefishinka ayna ka bixin wax barnaamij diimeed ah, xitaa wax u yar oo ah in ruux warka akhriyaya uu Bisinka ku bilaabo.
Maalinta Jamcaha oo ah maalinta ay muslinku cibaadaystaan shaqooyinkana ka nastaan degaanka Somalida, waxaa la ogol yahay salaada oo khudbad gaaban kaliya la akhriyo.
Wakaalada arimaha Islaamka u qaabilsan degaanka, waxay fulisaa awaamiirta dawlada oo kaliya, wayna ka gaabsadaan xaqa iyo waajibka culimonimo ee saaran.
Arimahani waxay ka mid yihiin xuquuqaha aas aasiga ah ee ugu horeeya ee ay yeelan karto bulshadu, la,aantoodna waxay keentaa dhibaato. Dalalka reer galbeedka oo 100% masiixi ah, waxay u ogol yihiin xuquuq dadka Islaamka ah ee degan xuquuq diimeed iyo mid dhaqan, meesha Atoobiya dad 100% Muslim ah ay u diidan tahay xusida diintooda.
Waxaa muuqata in Somalida Atoobiya ay maanta qaayibtay, arin ay hore u qaayibtay qoomiyada Oromada oo tirkoobta Atoobiya ka ah 40%. Arintaas oo ay ugu wacan tahay ciqaabta joogtada ah ee aan hiilka lahayn ee lagu hayo.
Inkasta oo dadwaynaha degaanka u dhashay ay jecel yihiin daawashada Telfeshinka oo baahiya heeso ku saabsan dhaqan xambaarsan ujeedada maamulka. Waxay dadwaynaha degaanka iyo guud ahaan Soomaalida daawata ESTV, aad ula yaaban yihiin, wax yarna ha ahaatee sababata ESTV looga daawan la,a yahay barnaamyo diini ah oo dadka xaqa u sheega.
Arimaha yaabka leh ee ESTV, laga baahiyo waxaa ka mid ah; culimo Islaam ah, madax masiixi ah, madaxda degaanka, haween, caruur iyo ciroole Muusik wada ciyaaraya.
Waxaa kale oo ESTV, laga baahiyaa arimo bah-dil ku ah masuuliyiinta degaanka oo dhidid dareeraya iyo koox faneed Soomaaliyeed, oo farta isugu fiiqaya.
In diinta, dhaqanka iyo maamuuska Soomaalinimo lagu hago ESTV, waxay dantu ugu jirtaa maamulka iyo dadwaynaha degaanka. Xumaanta iyo diin la,aantuna waxay dan ugu jirtaa Atoobiya.
Diintiyo dhaqankeena wacan, dalkaan ku ilaashaniyo dib iyo duugeena hadha diintuu anfacoodu yahay.